နှင်းကျခါစ တစ်ရက်နှစ်ရက်မှာ ဖြူဖွေးပြီး ကြည့်၍ကောင်းသော်လည်း ၃-၄ ရက်လောက် ရှိလာသောအခါ အောက်ခံကတ္တရာစေး၊ ရွှံ.နှင့်ရောပြီး ဗွက်ပေါက်လာကာ အရုပ်ဆိုး လာပါသည်။ နှင်းပေါ်မှာ ကားဘီးရာ လူခြေရာများနှင့် နယ်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ညစ်ပတ် မဲပုတ်သော ရေခဲ ရွှံ.ဗွက် တွေ ဖြစ်လာပါသည်။ တရားသဘောနှင့် ဆင်ခြင်ပါက ဖြူဖွေးလှပသော နှင်းပွင့်များ အဆင့်ဆင့်ရွေ.လျှော ပျက်စီးသွားသည့် နှင်း၏အနိစ္စ အခြင်းအရာကို ကောင်းစွာ တွေ.နိင်ပါသည်။
ဆေးရုံရောက်ခါနီးမှာတော့ (အေ -၄၆၅) လမ်းမကြီးမှ (အေ-၄၀၄၈) လမ်းသေးထဲသို. ချိုးဝင်ရပါသည်။ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ နှင်းတွေ ဖယ်ပေးထားသဖြင့် ပြသာနာမရှိလှသော်လည်း လမ်းသေးထဲမှာကျတော့ မချော်အောင် အတော်ဂရုစိုက်ပြီး မောင်းရပါသည်။
ကားအချို.မှာ နှင်းထဲမှာ ဆက်မသွားနိင်တော့သဖြင့် ကားကို လမ်းဘေးတွင် ထားပစ်ခဲ့ပြီး လူတွေက အိမ်အရောက် လမ်းလျှောက်သွားကြပါသည်။ တချို. ကတော့ ကားထွက်မည့်နေရာတွင် ရှိသည့်နှင်းတွေကို ဂေါ်ပြားများနှင့်ကော်၍ လမ်းရှင်းနေကြပါသည်။
ဆေးရုံမရောက်ခင် လမ်းပေါ်မှာ ရှေ.မှာ ကားများ လမ်းချော်နေသဖြင့် ဆက်မသွားနိင်ဘဲ ရပ်စောင့်နေရပြန်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ကားကို နှင်းထဲမှာ တရွေ.ရွေ.မောင်းရင်း ကားထဲမှာ ပါသည့် စီဒီကို ဖွင့်လိုက်ရာ မွေးဌာနီ အညာရပ်ဆီသို. ရော်ရည်မျှော်မှန်း စိတ်ဝယ်တမ်းတ လွမ်းရပါသည် ဆိုသော သန်းထွန်းလေး ၏ မမေ့သော အညာ သီချင်းသံထွက်လာပါသည်။ သုညအောက် (-၃ံ) မှ (-၈ံ) လောက်အေးသော နှင်းတွေထဲမှာ ဗမာပြည်က အညာအကြောင်း သီချင်းသံကို ကြားလိုက်ရတော့ အညာနေ ပူပူအောက်မှာ လှည်းလမ်းကြောင်း တလျှောက် ဖုံလုံးကြီးတွေ တလိမ့်လိမ့် တက်တာ မြင်ယောင်ပြီး ဗမာပြည်ကို ချက်ခြင်း ပြန်ပြေးချင်စိတ် ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ နေရောင်တောက်တောက်မှာ အင်္ကျင်္ီ ပါးပါး လုံခြည်ပါးပါး ဖိနပ်ပါးပါးနှင့် သွားလာနေကြမည့် ဗမာလူမျိုးများကို မြင်ယောင်၍ အားကျမိသည်။ သို.သော်လည်း ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရာမှာ နေရ သည်ဘ၀ သည် အဖြစ်မျိုး လူတိုင်းကြုံဘူးကြလိမ့်မည် ဆိုသော ကျွန်တော့် မွေးဌာနီ သီချင်းထဲကလိုပင် ဘ၀ပေး ကံစီမံရာ နေကြရသော ကျွန်တော်တို. ဘ၀မှာ ဘာမှ မတတ်နိင်ပါ။အို- အခုအေးပေမယ်လို့ နွေကျရင် အင်မတန်သာယာပြီးနေကောင်းအုန်းမှာဘဲလေ ဟုသာ စိတ်ကိုဖြေပြီး နှင်းထဲမှာ ပျော်ပျော်ကြီး သီးချင်းဆိုပြီးကားကို ဆက်မောင်းလာခဲ့ပါသည်။
တစ်ခါက ဆေးရုံက ဧည့်ကြို အမျိုးသမီးက မေးဘူးပါသည်။ ဒေါက်တာ က အင်မတန် ရာသီ ဥတု ကောင်းပြီး ပူနွေးတဲ့ ဗမာပြည်က ဖြစ်ရက်နဲ့ အခုလို ရေခဲသေတ္တာထဲက ဘ၀ကို ဘာလို. လာနေတာလဲ ဟု မေးပါသည်။ သူ.မေးခွန်းကို ကျွန်တော် မဖြေနိင်ပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင် အေးတဲ့အရပ်မှာ လာနေရသည်ကို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မသိတော့ပါ။ သူ.မေးခွန်းကို ကျွန်တော် မဖြေနိင်ပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင်အေးတဲ့ အရပ်မှာ လာနေရသည်ကို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မသိတော့ပါ။ ရှေးဘ၀များက သူများတွေကို ချမ်းတုန်နေအောင် တနည်းနည်းနဲ. ပြုမိခဲ့တဲ့ ကံအကျိုးပေးပေါ့ဟု အောက်မေ့မိပါသည်။
ခရစ်မတ် ရက်မှစ၍ ကျသောနှင်းမှာ ယခုစာရေးနေသော ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက် အထိ မရပ်သေးပါ။ အင်္ဂလန် တစ်နိင်ငံလုံး အနှံ.အပြားကျပါသည်။ နှင်းထုမှာ နေရာ အနိမ့်အမြင့် လိုက်၍ ၂ လက္မ မှ ၁၀ လက္မ တစ်ပေကျော် အထိ ထူပါသည်။ နှင်း ဆက်တိုက် ကျသဖြင့် လမ်းပန်း အဆက်အသွယ်များ အတော်ပင် ပိတ်ဆို.လျှက် ရှိနေပါပြီ။ ရထားများ ကားများလည်း အချိန်အတိုင်း မပြေးနိင်တော့ပါ။ လေယဉ်ပြေးလမ်းများ နှင်းဖုံးသဖြင့် လေယာဉ်များလည်း ခရီးစဉ် ဖျက်ကြရပါသည်။ ယခုရက်ပိုင်းများ ခရီးစဉ် ဖျက်ရသော လေယဉ်ပေါင်း အစီး ၄၀၀ ကျော်ပြီးဟု သိရပါသည်။ ကျောင်းများလည်း အားလုံးလိုလို ပိတ်ထားရသဖြင့် ကလေးများမှာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ.၍ ပျော်နေကြပါသည်။ ကလေးမိဘများမှာမူ ကလေးထိန်းပေးမည့်သူ အိမ်မှာ မရှိ၍ သူတို.ပါ အလုပ်မသွားဘဲ ကလေးထိန်းနေကြရပါသည်။ကျွန်တော်တို. ကဲ့သို. အလုပ်သွားနေရသူများ မှာတော့ နှင်းတွေ မြန်မြန်အရည်ပျော်ပါစေ၊ မိုးရွာပါစေ ဟုသာ ဆုတောင်းမိပါသည်။
မိုးလေ၀သ ဌာနကလည်း ရှေ.လျှောက် အအေးပေါ့စရာ မမြင်၊ ပို၍သာ အေးလာဦးမည်၊ နှင်းပိုကျဦးမည်ဟု ဆိုပြန်ပါသည်။ ဤသို.သာ ဆက်၍အေးနေမည်ဆိုလျှင် အပူငွေ.ပေးစရာ လောင်စာ ဓါတ်ငွေ. (Gas) မကြာခင် ကုန်သွားနိင်ဘွယ်ရာ ရှိသည်၊ အစိုးရ အနေနှင့် ဓါတ်ငွေ.ကို အခြားနိင်ငံများမှ အရေးပေါ်ဝယ်ဖို. လိုလိမ့်မည် စသည်ဖြင့် သတင်းစာများတွင် သတိပေရေးကြပါသည်။ အင်္ဂလန်နိင်ငံတွင် ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊နော်ဝေး၊ရုရှား စသော အခြားသော ဥရောပ နိင်ငံတွေလောက် နှင်းထူထူကျလေ့မရှိသဖြင့် ယခုလို အရေးပေါ်အအေးလွန်အခြေအနေပေါ်လာသောအခါ ကောင်းစွာမကိုင်တွယ်နိင်ပါ။ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် စီမံကိန်း၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာလည်း လုံလောက်အောင် မရှိပါ။လမ်းပေါ်မှာ ဖြူးပေးစရာ သဲဆား( salt grit) များလည်း ၁ ရက် ၂ ရက် အတွင်းပြတ်ထွက် သွားပါတော့သည်။ ၎င်း ဆားရောပြီးသား သဲမှာ ချက်ရှိုင်းယား( Cheshire) နယ် (Winsford) အရပ်နှင့် ( Cleveland) အရပ်တွင် ရှိသည့် ဆားတွင်းများမှ ထွက်ပါသည်။ နှစ်တိုင်း ဆောင်းဝင်ချိန်တွင် တစ်ပြည်လုံးရှိ လမ်းများပေါ်တွင်ဖြူးရန် ဤနေရာများမှ လုံလောက်စွာ ပေးနိင်သော်လည်း ယခုနှစ်တွင်တော့ လောက်ငလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု သတင်းစာများက ဆိုပါသည်။
ဗြိတိသျှ ၀န်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒွန်ဘရောင်းက ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု (Global warming) ကို တားမြစ်အောင် သူကြိုးစားပါ့မည် ဟု တလောက ကတိစကား ပြောထားတာ ရှိပါသည်။ ယခုဗြုံးကနဲ အအေးလှိုင်းဓါတ်ကြီး ၀င်လာသောအခါ မစ္စတာ ဘရောင်း တယ်စွမ်းပါလား ၊သူပြော လိုက်တာနဲ. ကမ္ဘာကြီး ချက်ချင်းအေးသွားပြီ ဟု တီဗီ သတင်းကြေငြာသူ တစ်ဦးက ပျက်ရယ် ပြုတာ ကြားလိုက်ရပါသေးသည်။
နှင်းကျခါစမှာတော့ နှင်းပွင့်ကလေးတွေ တကယ် ကျတာလားလို.ကြည့်ရင်း တက္ကသိုလ်မှာ ဝေတဲ့နှင်းရယ် ၊နှင်းကလေးတွေမှ ဟုတ်ရဲ.လား ဆိုသော တက္ကသိုလ်မှာ ဝေတဲ့နှင်း သီချင်းကို ဆိုမိသည်။ ဖြူဖွေးသော နှင်းပွင့်ကလေးတွေ လှပသာယာနေချိန်မှာ မာမာအေး၏ နှင်းတွေဝေမှဖြင့်ကွယ် သီချင်းကို သတိရ သီကျုးမိပြန်သော်လည်း နှစ်ပတ်လောက် ဆက်တိုက်အေးပြီး ရေခဲများ နှင်းခဲများ မပျော်နိင်သောအခါမှာတော့ ရာသီဥတုနွေးနွေး လေးရောက်ပါစေတော့ ဟု ဆုတောင်းရင်း နှင်းပျောက်တဲ့နွေ သီချင်းကို ဆိုညည်းကာ နွေဦးပေါက်ရာသီ (spring) ကို တမ်းတမိပါတော့သည်။